Xuska todobaadka ka hortagga tacadiyada loo geysto Haweenka oo lagu qabtay Belad Xaawo – Radio Muqdisho
Munaasabad lagu xusayey totobaadka ka hortaga tacadiyada loo geysto Haweenka oo lagu qabtay Degmada Belad Xaawo ee Gobolka Gedo.
Munaasabadan oo ay ka qeyb galeen qeybaha bulshada, maamulka Degmada iyo marti sharaf kale ayaa ka qeyb galayaasha waxa ay si wada jir ah uga hadleen sida looga hortagi karo in tacadiyo loo geysto Haweenka iyo carruuta, isla markaana ay marwaliba garab taaganyihiin sidii dhibtaasi meel looga soo wada jeesan lahaa.
Guddoomiyaha Arrimaha bulshada ee Degmada Belad Xaawo Cabdiqaadir Xuseen ayaa sheegay inay muhiimtahay in la dhowro xaquuqda haweenka, isla markaana ay kan maamul ahaan garab taaganyihiin cidkasta oo arrintaasi gacan ka geysaneysa.
“Barnaamijka aan halkan isugu nimid waxa uu gundhig u yahay ka hortagga taciyada lagula kaco haweenka, Diinteena iyo Dastuurka KMG ah ee dalka waxa ay ka soo horjeedaan in tacadiyo loo geysto dumarka iyo carruurta, sanadkasta 25 November ayay bilaabataa xuska munaasabadan, waxa ayna ku egtahay 10-ka December, sidaa darted waa inaan hal meel uga soo wadajeesanaa cidkasta oo isku dayda inay taccadiyo kula kacaan Dumarka.” ayuu yiri Guddoomiyaha Arrimaha bulshada ee Degmada Belad Xaawo.